सरकार तथ्यांकमा आधारित नीति तर्जुमा गर्ने काममा लागेको छः उपाध्यक्ष डा. पौडेल - Arthatantra.com
सरकार तथ्यांकमा आधारित नीति तर्जुमा गर्ने काममा लागेको छः उपाध्यक्ष डा. पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकार तथ्यांकमा आधारित रहेर नीति तर्जुमा गर्ने काममा लागि रहेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर तयार पारेको ‘आद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले
तथ्यांकमा आधारित शासन नै सुशासन हो बताउनुभयो ।
‘अहिले सरकार पनि तथ्यांकमा आधारित काम गर्न सरकार लागिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तथ्यांकमा आधारित शासन नै सुशासन हो, हामी तथ्यांकमा आधारित रहेर नीति तर्जुमा गर्न खोजिरहेका छौँ ।’ उहाँले निजी क्षेत्रले गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रबाट आउने यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदनको निरन्तरताका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो ।
परिसंघले त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको पहिलो अंक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ । प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगहरुले कूल उत्पादन क्षमताको ६४.८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को चौथो त्रैमासको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को चौथो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ८ रहेको बढेको देखाएको छ । तर, त्यसअघिको वर्षको चौथो त्रैमासमा भने उद्योगको आय ४.७ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । प्रतिवेदनले व्यवसायको क्षमता उपयोगमा कोभिड–१९ को महामारीको प्रत्यक्ष असर परेको र यो अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उक्त प्रतिवेदन निजी क्षेत्रले थिंक ट्यांकको रुपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउने बताउनुभयो । उहाँले परिसंघको तर्फबाट सुझाव मात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रण समेत प्रस्तुत गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी अंकमा थप क्षेत्रलाई समेट्दै अध्ययनलाई विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले औद्योगीकरणका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न परिसंघ सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको भन्नुहँदै त्यसलाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई परिसंघले हरेक त्रैमासमा निरन्तर प्रकाशन गर्ने बताउनुभयो । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १६ शनिवार १२:३५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे साताको सेयर बजारः १५२ अंकको गिरावट, कुन उपसूचकमा कस्तो असर ?
पछिल्लाे फोनपे तेस्रो वर्षमा : ५ लाख बढि मर्चेन्ट, दैनिक ३० करोड बढिको कारोबार